को–को परे पूर्व माओवादीबाट नेकपाको स्थायी समितिमा ? « Pahilo News
को–को परे पूर्व माओवादीबाट नेकपाको स्थायी समितिमा ?
प्रकाशित मिति : 28 May, 2018 11:16 pm
काठमाडौं, १४ जेठ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिमा १९ नेताको नाम टुंगो लगाएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा‘बादल’सँगसमेत परामर्श गरेर स्थायी समिति सदस्यको नाम टुंगो लगाएका हुन् ।
तत्कालीन माओवादीबाट नेकपाको स्थायी समितिमा क्रमश ः अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेताहरु रामबहादुर थापा‘बादल’, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, अग्नीप्रसाद सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत, जनाद्र्धन शर्मा, मात्रिका यादव, पम्फा भुषाल, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, गणेश शाह, चक्रपाणी खनाल, मणी थापा र लिलामणी पोखरेल छन् । प्रचण्डले सबै नेताको नाम टुंगो लगाइसकेकाले अब बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि नाम अनुमोदन हुने बताइएको छ ।
स्थायी समिति सदस्यको चर्चामा रहेका वैचारिक नेता राम कार्की र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता रामचन्द्र झा भने प्रचण्डको रोजाईमा परेनन् । त्यस्तै, अन्य प्रतिस्पर्धामा आधा दर्जन नेता पनि प्रचण्डको रोजाईमा परेनन् । वरिष्ठ नेता अमिक शेरचन भने आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी हुने स्रोतले जनाएको छ ।